April 2019 - Page 2 of 9 - Ceelhuur Online
Maamulka Gobolka Banaadir oo Digniin u diray Shacabka Muqdisho
April 28, 2019 admin193
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa maanta soo saaray labo xeer oo ah Digniin ku socda Shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho. Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir Saalax Cusmaan oo saxaafadda u akhriyay xeerkan ayaa sheegay in Maamulka Gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ee Xamar ku mashquulsan yihiin dib u habeynta bulaacadaha iyo naleynta, si bilicda dib loogu soo […]
Amniga magaalada Muqdisho oo laga shiray
April 28, 2019 admin182
Duqa Muqdisho ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) ayaa sheegay in maamulka iyo shacabka Gobolka ay ka go’an tahay sidii ay qeybtooda uga qaadan lahaayeen qorshe-yaasha lagu dar-dar gelinayo amniga Caasimadda. Eng. Yarisow oo guddoominayey kulan ay ka wada qeyb galeen Wasiirka Amniga Mudane Maxamed Abuukar Islow Ducaale, Taliyeyaasha Ciidanka Ammaanka, […]
April 27, 2019 admin194
Magaalada Baydhabo ee xarunta KMG ah maamulka Koonfur Galbeed ayaa maanta lagu qabtay doorashada Kuraas ka bannaan Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya. Cali Sheekh C/llaahi (Cali Afgooye) ayaa ku guuleytay kursiga xildhibaanimo ee uu banneeyay agaasimihii Hay’adda Nabad sugida iyo Sirdoonka Qaranka Xuseen Cismaan Xuseen. Cali Afgooye ayaa helay dhammaan codadkii Ergadu dhiibteen ee ahaa 51 […]
Doorashada 3 kursi oo Maanta ka dhacaysa Baydhabo
April 27, 2019 admin180
Magaalada Baydhabo xarunta kumeelgaarka dowlad goboleedka Koofur Galbeed ayaa maanta lagu qabanayaa doorashada sadex kursi oo ka banaan golaha shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya. Kuraasta la dooranayo waxaa kala baneeyey Xuseen Cismaan Xuseen taliyihii hore ee hay’adda Nabadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka (NISA), Xuseen ayaa u tartamay Madaxweynaha Koofur Galbeed, isago ku guuldareystay, sidoo kale Kursigii Axmed Cabdulle […]
Naadiga Akhriska iyo Qoraalka Cadaado oo la Daahfuray (Sawirro)
April 27, 2019 admin294
Magaalada Cadaado Xarunta Barlamaanka waxaa Xalay laga daahfuray Naadiga Akhriska iyo Qoraalka degmada Cadaado, Naadigan ayaa waxaa Aasaasay 3 dhalinyaro oo ku nool Cadaado, wuxuuna hoostagi doona Madasha Akhriska iyo Qoraalka Galmudug. Aasaasayaasha Maxamed Shariif Maxamed Maariya Maxamuud Maxamed Sharmaarke Xasan Maxamed Ujeedaha loo aasaasay Naadigan ayaa ah kor u qaadista Aqriska iyo Qoraalka bulshada […]
Wargeyska The Star: Kenya waa in ay il gaar ah ku eegtaa ciidanka Danab Somalia
April 26, 2019 admin382
Wargeyska The Star, ee ah kan saddexaad ee loogu akhris badan yahay Kenya, ayaa qoray maqaal uu cinwaan uga dhigay “Kenya waa inay si qoto-dheer ula socotaa dhaq-dhaqaaqyada Danab Soomaaliya”. Wargeyska ayaa ku baaqey in Kenya ay ka digtoonaato ciidammada Danab ee loo sameynayo Soomaaliya iyo iskaashiyada kale ee Soomaaliya ay ku tallaabsanayso. The Star […]
Xubin ka tirsan Alshabaab oo lagu qabtay Ceelasha Biyaha
April 25, 2019 admin243
Hayadda Nabad Suggida & Sirdoonka Qaranka Somaliya NISA ayaa sheegtay Ciidamada ammaanka inay gacanta ku soo dhigeen xubin ka tirsanaa Ururka Al Shabaab. Kadib hawlgal qorsheysan oo Ciidamada ammaanka ay ka fuliyeen deegaanka Ceelasha biyaha ayaa la sheegay in lagu soo qabtay xubin ka tirsanaa amniyaadka Shabaab. Qoraal la soo dhigay Bogga Twitterka ee Hay’adda […]
MD Farmaajo oo safar aan la shaacin ku tagay Eritrea (Sawirro)
April 24, 2019 admin318
Sida uu boggiisa gaarka ah ku qoray wasiirka Warfaafinta Eritrea Yemane G. Meskel ayaa sheegay in Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu saaka ka dagay garoonka diyaaradaha Asmara caasimadda Eritrea. wafdiga Madaxweynaha ayaa waxaa ka mid ah wasiirka Waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre iyo Masuuliyiin kale. Somalia's President Mohamed A. Mohamed arrived in Asmara […]
Faafaahin Qarax ka dhacay Boosaaso
April 24, 2019 admin264
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Qarax khasaaro geystay oo ka dhacay Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari. inta la xaqiijiyay 4 Askari ayaa ku dhaawacmay Qarax lala beegsaday Gaari uu lahaa Guddoomiyaha Gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waceys (Dhedo). Qaraxa oo sida la sheegay ahaa Miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa ka dhacay Isgoyska […]
Sarkaal Alshabaab ah oo lagu qabtay Muqdisho
April 24, 2019 admin364
War kasoo baxay Hay’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa waxaa lagu shaaciya in gacanta lagu dhigay xubin ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Qoraal kooban oo lasoo dhigay barta twitter-ka ee Hay’adda NISA ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Ammaanka ay gacnata ku dhigeen xubin Al-shabaab u qaabilsanaa Amniyaatka,isla markaana ku sugnaa Degmada Shibis […]